သက်ရှိ ရီဗျူး (သို့) ကိုကိုကြီး – Min Thayt
နိုင်ငံတော်သစ်နှင့် အမျိုးသား အမှတ်သရုပ်
မင္ျခစ္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား စာအုပ္၌၊ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျပီး စာမူျဖစ္ပါသည္။
စာအုပ်ရီဗျူးများ ရေးရင်း၊ ဒီတစ်ခါတော့ စာအုပ်ကို ဖတ်ရင်း လူကို ရီဗျူး လုပ်ရတော့မှာပဲ ဟူ၍ တွေးမိလိုက် သည်။ နိုင်ငံတော်သစ်နှင့် အမျိုးသား အမှတ်သရုပ် စာအုပ်သည် ဟောပြောချက်များကို စာအုပ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်၍ စကားများမှ စာအုပ်အသွင်ဖြစ်လာသော သဘောဖြစ်သည်။ စာအုပ်ဟူ၍ လူနှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်မှု ရာနှုန်း နည်းရကား၊ စကားသည် လူနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည့် ရာနှုန်း ပိုများသည်။ ထို့ကြောင့် စာအုပ်ကို ဖတ်ရင်း လူကို ရီဗျူး လုပ်ရခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း စာဖတ်သူကို သံတော်ဦး တင်ရပါသည်။
(သက်ရှိ ရီဗျူးရေးရာတွင် ကိုကိုကြီးကို ကိုကိုကြီးဟုသာ တိုက်ရိုက်သုံးစွဲရသည်ကို နားလည်ပေးစေလိုပါသည်။ ဆရာ သည် ကျွန်တော့်ထက် အသက်၊ ဂုဏ်၊ ဖြတ်သန်းမှု၊ ဉာဏ် အမြင်၌ များစွာကြီးမားသူဖြစ်သော်လည်း စာ အရေးအသား၏ အားကို ထက်သန်စေလိုသော စေတနာဖြင့် နာမ်စားမသုံးဘဲ တိုက်ရိုက်သုံးစွဲရပါကြောင်း….)
သက်ရှိ ရီဗျူးကို စာတစ်ပုဒ်၊ စာတစ်အုပ်၊ ဟောပြောချက် ၃ / ၄ ပုဒ်ဖြင့် ရေးအံ့သော် ဘောင်သည် အင်မတန် ကျဉ်းအံ့။ သို့သော် အဝေးက လူကို မြင်သလောက် သိသလောက် ထိတွေ့မိသလောက် လွတ်လပ်စွာ သဘော ထင်မြင်မှန်းဆ နိုင်ကြောင်း ကျွန်တော် လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ပါသည်။ ယခု သွားနေသည်က လစ်ဘရယ် ဒီမို ကရေစီ မဟုတ်ပါလော။
ကိုကိုကြီးကို စာအုပ်များနှင့် အရင် မထိတွေ့ခင်၊ လူချင်း အရင် ထိတွေ့ကြသည်။ ကျွန်တော် နိုင်ငံတည် ဆောက်ရေးကို ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ဖြတ်သန်းသော သူဖြစ်သည်။ ဘာကိုမျှ လောက်လောက်လားလား တတ်သိ ၍ အသွင်ကူးပြောင်းရေးဖြစ်စဉ်၌ ပါဝင်ရသည် မဟုတ်။ သိသလောက်နှင့် မုဆိုး စိုင်သင် ပါဝင်ရခြင်းသာဖြစ် သည်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းအသွင်၊ စာပေ အသွင်ယူ၍ နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုအရွေ့ကို နိုင်သည့် အားဖြင့် တွန်း စဉ်ကာလ အဦးအစက ကိုကိုကြီးနှင့် ဆုံဖြစ်ကြသည်။ လူငယ်တစ်စုက နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်ဟောင်းများထံမှ ဖြတ် သန်းမှု အမြင်များကို လက်ဆင့်ယူရန် တွေ့ဆုံသည့် သဘောပင်။
ကိုကိုကြီးတို့ ထောင်က လွတ်တော့၊ မန္တလေးကို ရောက်သည်။ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ဖို့ ဖိတ်တော့ ကိုကိုကြီး နှင့် တွေ့ကြ၊ မေးကြ၊ ဖလှယ်ကြ လုပ်မိသည်။ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ၈၈၈၈ ကာလ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးကို သက်ရှိထင်ရှား ချည်းကပ်တီးခေါက်ကြည့်ခွင့်ရသည့် အခြေအနေဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ကြုံကြ၊ ဆုံကြပြီး အတော်ကြာမှ ကိုကိုကြီး ၏ စာအုပ် အချို့ထွက်လာသည်။ သည်ထဲက တစ်အုပ်ကို ကျွန်တော် ဖတ်မိသည်။ အမှတ်သရုပ် စာအုပ်က ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ၂၀၁၄ တွင် ထွက်သော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများ လှိုင်လှိုင်ဖြစ်ပေါ်နေချိန်။ အကြောင်းအရာများသည်လည်း၊ အမျိုးသားရေး နှင့် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးစု ပဋိပက္ခများအပေါ် ကိုကိုကြီး၏ ယူဆချက်၊ ရှုမြင်ချက်များသာ များသည်။
သို့သော် သိလိုက်ရသည်ကား၊ ပြဿနာတစ်ရပ်ကို ရပ်ကြည့်သည့် လူတစ်ယောက်၏ ရှုထောင့်က ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံနည်းဆိုတာကို အကဲခတ်လိုက်ရသည်။ ပြဿနာများအပေါ်ထားသည့် အမြင်၊ သဘောထား၊ ရှုထောင့်၊ ရပ်တည်ချက်များ လူတစ်ယောက်၏ အဇ္ဈတကို အကဲခတ်နိုင်ရန် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့် အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးသမား စစ်စစ်များ၏ သဘောသဘာဝနှင့် စရိုက်လက္ခဏာများကို အင်မတန် စိတ်ဝင်စားမှု ထက်သန် လေ့ရှိသည်။ သိန်းဖေမြင့်၊ ဦးနု နှင့် ဒဂုန်တာရာတို့ ရေးသည့် စာအုပ်များထဲမှ နိုင်ငံရေးသမားတို့၏ အဇ္ဈတကို စာအုပ်တွေ ထဲက ရှာဖွေကြည့်ဖူးသည်။ ထို့နောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေး အစဉ် အလာကြီးသည့် နိုင်ငံရေး သမား စစ်စစ်ကြီးများဖြင့် တွေ့ဆုံ၊ ကြုံတွေ့ခိုက် အချိန်များ၌ ဤသို့ သတိထား အကဲခတ်သည့် အကျင့်က လည်း စွဲမြဲလာသည်။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင် ကိုကိုကြီးကို ၈၈၈၈ မျိုးဆက် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ဆိုသည်ထက် ပို အာရုံကျမိသည့် အချက်များ ရှိသည်။ ကျွန်တော်က နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်း တစ်ယောက်ဖြစ် သည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ ကိုကိုကြီးကလည်း ဂျီတီအိုင် ဆင်း တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် ကျောင်းပြီးပြီး ချင်း စာကြည့်တိုက်မှူး လုပ်ရင်း နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ တက်ဖြစ်သည်။ ကိုကိုကြီးကလည်း ၁၉၈၄ – ၅ တွင် အိုင်အာ (အပတ်စဉ် – ၁) ဖြစ်နေပြန်သည်။ ကျွန်တော်အနေဖြင့် ဂျီတီအိုင် အုပ်စုများတွင် တော်လှန်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေး အစဉ်အလာကြီးသော ခေါင်းဆောင်များကို အာရုံကျတာ သဘာဝကျမည်ထင် သည်။ ကျွန်တော်တို့ စတုတ္ထမျိုးဆက်က ကိုကိုကြီးနှင့် မင်းကိုနိုင်တို့ကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အစဉ် ၌ ဒုတိယလိုင်းမှ ခေါင်းဆောင်များဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ၈၈ မျိုးဆက်နောက်တွင် ကျွန်တော် တို့ ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ အလှည့်ကျ ဒီ့ထက် တံပိုးဝန်နိုင်အောင် ထမ်းနိုင်ရန် ပုခုံးသား အရေထူ တောင့်တင်းရန် လိုသည်ဟု ယူဆထား မိသည်။
ကိုကိုကြီး ဟောပြောချက်ထဲမှ အမေး၊ အဖြေတွေကို ဖတ်ရင်း၊ ကျဉ်းထဲ ကြပ်ထဲ ရောက်စေသော အမေးများကို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ကိုင်တွယ်တတ်သည့် ကိုကိုကြီး၏ အရည်အသွေးကို အကဲခတ်မိသည်။ ကိုကိုကြီး အနေဖြင့် အိုင်အာသမား (IR – နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာလေ့လာထားသူ) ပီပီ နိုင်ငံရေးကို ခြုံငုံသုံးသပ် ဆက်စပ် ကြည့်မြင်မှု အားကောင်းလှသည်။ Persepective View အားကောင်းသူဟု ဆိုလိုသည်။ သို့သော် ကိုကိုကြီးမှာ ယေဘုယျသမား မဟုတ်။ နိုင်ငံရေးသမား အမည်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ ယေဘုယျတွေ တွင်တွင်ကြီး ရွတ်တတ်သူ များကို ကျွန်တော် အတော်များများ ကြုံတွေ့ဖူးသည်။ ခြုံငုံဆက်စပ်သည့် အမြင်သည် အားကောင်းချက် ဖြစ် သော်လည်း လွန်ကဲသွားပါက ယေဘုယျသမားဖြစ်သွားတတ်သည်။ သို့သော် ကိုကိုကြီးမှာ ယေဘုယျသမား မဟုတ်ကြောင်း ရိပ်စားမိခဲ့သည်။
ကိုကိုကြီးမှာ ပြဿနာနှင့် အဖြစ်အပျက်များကို ဆက်စပ်ခြုံငုံကြည့်ဖို့ ကြိုးစားသော်လည်း တစ်ဖက်တွင် ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာကြည့်တတ်သူဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ Prespective Viwe နှင့် Analytical Viwe ကို ဟာမိုနီဖြစ်စွာ စပ်ဟပ်သုံးစွဲ တတ်သူဖြစ်ခြင်းက ရှားပါး နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်၏ စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ (စာ – ၅၀ အပေါ် ရှုမြင်ချက်)
တဖန် ကိုကိုကြီးအနေဖြင့်၊ အပြောင်းအလဲအပေါ် ရှုမြင်ပုံများ တွင် ရပ်တည်ချက် အချို့ကို တွေ့လိုက်ရပြန် သည်။ နိုင်ငံရေး စိတ်ဆန္ဒ၏ အရေးပါပုံကို အလေးထားသော်လည်း စိတ်သဘော ထား အခြေအနေများကို ပြောင်းလဲစေရန် အကြောင်းတရားများ တည်ဆောက်၍ ပြောင်းလဲယူနိုင်ကြောင်း ကိုကိုကြီးသဘော ထားကို တွေ့မြင်ရသည်။ ဤအချက်သည် construtivism သမား တစ်ယောက်၏ သရုပ်သကန်ပင် ဖြစ်သည်။ Statesman ဟုခေါ်သည် နိုင်ငံပြုသမား (နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးသမား) များ၌ ဤသို့ ရှုမြင်ချက်တွေ့ရလေ့ရှိ သည်။ (စာ – ၅၁ အပေါ် ရှုမြင်ချက်)
၈၈၈၈ အရေးအခင်း၏ အရေးပါပုံ အပေါ် ကိုကိုကြီး၏ ရှုမြင်ချက်ကို တွေ့ရပြန်သောအခါ အာဃာတများကို သင်ပုန်းချေ ထားသူဟု ဟု မြင်လိုက်ရသည်။ သို့သော် ကိုကိုကြီးသည် သမိုင်း၏ ဖြစ်တည်မှုကို စွဲမြဲစွာ ခံယူထားသူလည်း ဖြစ်နေပြန်သည်။ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ၌ ကိုကိုကြီးက သူ့ကိုယ်သူ moderate သမားအဖြစ် ရပ်ခံထားသည်။ တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်ခဲ့သည့်တိုင် ရှားရှားပါးပါး စားပွဲဝိုင်းနိုင်ငံရေးကို အလေးကဲသည့် စရိုက်က ချီးကျူးစရာဖြစ်သည်။ အိုင်အာသမားများအဖို့ သံတမန်စရိုက် မွေးမြူထားခြင်းသည် နိုင်ငံရေး စွမ်းရည် တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ တော်လှန်ရေးမျိုးဆက်ထဲတွင် moderate ကျသူ မရှားလှသော်လည်း သံတမန် စရိုက်ရှိသူကား ရှားလှ၏။ ကိုကိုကြီး၌ အဆိုပါ အရည်အချင်းမျိုးကို တွေ့ရသည်မှာ ဝမ်းသာစရာဖြစ် သည်။ (စာ – ၅၂ အပေါ် ရှုမြင်ချက်)
အဖိနှိပ်ခံ မျိုးဆက်များအဖို့ ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ တော်လှန်ခြင်း ကိစ္စများကို အထူးအထွေလေ့ကျင့်နေစရာ လိုမည် မထင်။ သို့သော် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သည့် အလေ့ကား ရှားပါးလှ၏။ သို့သော်လည်း အဖိနှိပ်ခံရသည့် မျိုးဆက်မှ မဟုတ်၊ အဖိနှိပ်ခံ မဟုတ်သည့် မျိုးဆက်တွင်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သည့် ဓလေ့ မြန်မာ၌ ပါးရှားလှ၏။ မြန်မာ့လူမှုနိုင်ငံရေးဓလေ့ သုတေသနစာ အချို့ကိုလေ့လာကြည့်က သိနိုင်သည်။ ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်နိုင်စွမ်းနိမ့်လှသည့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဓလေ့အတွင်းက နိုင်ငံရေးသတ္တဝါများထဲ၌ ကိုကိုကြီးကို ဖြူမည်း နိုင်ငံ ရေး လမ်းကြောင်းမှ ဖောက်ထွက်နိုင်သူဖြစ်မှန်း တွေ့လိုက်ရသည်။ ရန်သူ – မိတ်ဆွေ အမြင်မှ ဖောက်ထွက်နိုင် သည့် နိုင်ငံရေး အမြင်ကို တွေ့ရသည်။ အစဉ်အလာထဲက ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်၊ ဖောက်ထွက်ရဲသူဟု ပညတ်လိုက် သည်။ (စာ – ၅၄ အပေါ် ရှုမြင်ချက်)
နိုင်ငံရေးသမားများ၌ ဝါးလုံးသိမ်း/ရောကြိတ်သမားတွေ များလှ ၏။ တော်လှန်ရေးမျိုးဆက်အဖို့ ခံစားချက်ကဲ သည့် စဉ်းစားချက် များက များလွန်းလှသည်။ ခံစားချက်များမကဲလျှင်လည်း ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ စစ်ဖိနပ် အောက်မှ လွတ်မည်မထင်။ တော်လှန်ရေးကာလ၌ အင်မတန် အသုံးဝင်လှ၏။ သို့သော် တည်ဆောက်ရေး ကာလ၊ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလများ၌ နေရာတကာ ခံစားချက်ကဲ စဉ်းစားချက်များ မင်းမူနေလျှင်ကား၊ တည်ငြိမ်၍ ညင်သာသော အပြောင်းအလဲ ဖြစ်မည် မထင်။ ကြမ်းရှသော နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကာလကို ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းရအုံးမည် ထင်သည်။ ကိုကိုကြီးအနေဖြင့်၊ ခံစားချက် များကို သတိဖြင့် ချွန်းအုပ်၍ စဉ်း စားနိုင်သူဟု မြင်ရသည်။ သလဲသီးများလို ပြဿနာနှင့် ခံစားချက်များ၊ သမိုင်းဖြတ်သန်းမှုများအပေါ် အကန့် လိုက် ဇယားချနိုင်သူဖြစ်သည်။ (စာ – ၅၄ အပေါ် ရှုမြင်ချက်)
ကိုကိုကြီးအနေဖြင့်၊ လက်တွေ့နိုင်ငံရေးမှ ဖြတ်သန်းလာသူဖြစ်လာခြင်းကြောင်းလားမသိ၊ လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားတတ်သည့် ယူဆချက်များကိုတွေ့မြင်ရပြန်သည်။ သို့သော် လက်တွေ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းက နိုင်ငံ ရေး သတ္တဝါတိုင်းသည် လက်တွေ့စဉ်းစားတတ်သူများဟု တရားသေ မမှတ်ယူရာ။ အမျိုးသားရေးဝါဒီ၏ အစစ် အမှန်သဘောကို နားလည်မှု၊ ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် အမျိုးသားစရိုက်လက္ခဏာများကို ချည်းကပ်ပုံသည် အတု ယူစရာ ကောင်းလှသည်။ အော်တိုမင်ဘစ်စမတ် က ပြောခဲ့ဖူးသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတာကို လုပ်တာ နိုင်ငံရေး… ဟူ၍။ ရီယယ်ပိုလိုက်တစ်ကို ဖြစ်နိုင်ချေ နှင့် ဖြစ်သင့်မှုအပေါ် မျှခြေချနိုင်သူဟု ယူဆလိုက်ရသည်။ အထူး သဖြင့်၊ အမှတ်သရုပ်များအပေါ် ကိုကိုကြီး၏ ရှုမြင်ချက်များကို ကြည့်၍ သိနိုင်သည်။ အမျိုးသားသရုပ် နှင့် လူ့ အခွင့်အရေးအပေါ် မျှခြေ ချိန်ညှိတတ်သည့် စွမ်းရည်ကို အကဲခတ်မိသည်။ (စာ – ၂၈ အပေါ် ရှုမြင်ချက်)
အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးဝါဒ၏ အန္တရာယ်နှင့် အစွန်းရောက် ဂလိုဘယ်ဝါဒ၏ အစွန်းများကို ညင်ညင်သာ သာ ကိုင်တွယ်သွားသည်ကို ထပ်မံ တွေ့ရသည်။ ဗုဒ္ဓ လမ်းညွှန်ချက်ထဲမှ ပဋိပါဒလူသားပါလား…. ဆိုတာ တွေ့လိုက်ရသည်။ ကိုကိုကြီးမှာ နိုင်ငံရေးအရ Moderate စရိုက်ရှိသူဖြစ်သော်လည်း၊ ပြုပြင်ရေးသမား တစ် ယောက်ဖြစ်နေပြန်သေးသည်။ တိုးတက်လိုသော၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုသော သဘောထားအမြင် ထက်သန်သူ ဖြစ်သည်။ moderate နှင့် reformist သည် ဆန့်ကျင်ဘက် မဟုတ်သည့် တိုင်၊ အတူ သဘောဟု ယူသော် မရချေ။ သိမ်မွေ့သော နိုင်ငံရေးစရိုက်ရှိသူဖြစ်သူပင်။ (စာ – ၂၉ အပေါ် ရှုမြင်ချက်)
တော်လှန်ရေး မုန်တိုင်းကြမ်းကြမ်းကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသူ ပီပီ ကိုကိုကြီးမှာ အရာရာကို သတိဖြင့် ပြုမူ ပြောဆိုနေ ရဟန်ကို အထင်းသားတွေ့နေရသည်။ အထူးသဖြင့်၊ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကာလ၌ အမှတ်အသားအကျပ် အတည်းများမှ ကျော်လွှားနိုင်ရေး အမြင်သဘောထားများကို ကိုကိုကြီးက တိတိကျကျ ပြောသည်။ ဆင်မြူရယ် ဟန်တင်တန်က ယဉ်ကျေးမှုများ တွန်းတိုက်ခြင်း ကျမ်း ၌ ၂၁ ရာစုသည် ယဉ်ကျေးမှုများ အချင်းချင်း အတွန်းအတိုက် ဖြစ်မည့် ပဋိပက္ခရာစု ဖြစ်မည်ဟု ဟောကိန်းကို ကျွန်တော် သတိရမိသေးသည်။ ဆင်ခြင်တုံ တရားနှင့် ဒီမိုကရက်တစ်ဓလေ့ဖြင့် ယဉ်ပါးခြင်းကသာ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် လျှောက် နိုင်မည်ဟု ကိုကိုကြီးက ယုံကြည်ပုံရသည်။
ဒီမိုကရေစီ၌ နိုင်ငံသားတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို အဓိက ထည့်သွင်းစဉ်းစားသူဖြစ်သည်။ ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ် သည် စားသုံးသူအခြေပြု စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်လျှင်၊ ဒီမိုကရေစီသည်လည်း လူထုအခြေပြု နိုင်ငံရေး (people orientated politics) စနစ်ဖြစ်သည် ဟု ကိုကိုကြီးက ခိုင်ခိုင်မာမာ ယူဆသည်။ အမှတ်သရုပ်များအချင်းချင်း အတွန်းအတိုက်ကို သတိကြီးကြီး ချည်းကပ်ရန် သတိပေးသည်။ ဒီမိုကရေစီဓလေ့နှင့် ယဉ်ပါးမှ ဖြစ်မည်၊ ဆင်ခြင်တုံတရား၊ သည်းခံမှု (tolerance) ဖြင့် အမှတ်သရုပ်အကျပ်အတည်းကို ကျော်လွှားရန် ဆန္ဒရှိဟန်တူ သည်။ (စာ – ၂၀ မှ ၃၀ အပေါ် ရှုမြင်ချက်)
အမှတ်သရုပ်ကို ထိန်းသိမ်းရာ၌ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကြည့်တတ်ဖို့ သတိပေးထားပြန်သည်။ reflective mindset ဖြင့် ရပ်ကြည့်သည်ဟု ကျွန်တော် မြင်သည်။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့် ခေတ်ရေစီး၏ ရိုက်ခတ်ချက်ထဲမှာ သတိရှိရှိ လှမ်းကြဖို့ လက်တို့ထားသည့် စကားလုံးများကို ဟောပြောချက်၌ တွေ့ရသည်။ လူတွေဆိုတာ နီးလွန်းလျှင်လည်း မမြင်တတ် ဖြစ်သည် မဟုတ်လား။ ဤသို့ ဆက်စပ်ပြီး၊ လူထုစိန်ဝင်းက သံယောင်လိုက် သည့် ဖားတွေ အကြောင်းရေးသည့် ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ကို သတိရမိသေးသည်။
သို့သော် ကိုကိုကြီးမှာ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကို အဆိုးမြင်သူ မဟုတ်။ ကမ္ဘာကြည့်ကြည့်နိုင်အောင် သူကိုယ် တိုင် ကြိုးစားနေသူဖြစ်သည့်တိုင်၊ နိုင်ငံရေးအောက်သက်ကျေမှုကို တန်ဖိုးထားသူဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပြန်သည်။ တိုးတက် ဖောက်ထွက်ပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်စွမ်းရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ထားသည့် စေတနာကို တွေ့ရသည်။ ကမ္ဘာကြည့်ကြည့်၊ ကိုယ့်အရပ် ကိုယ့်ဇာတ် အခြေအနေနှင့် အပ်စပ်အောင် ကြိုးစား လိုသည့် သဘောထားတွေ့ရသည်။ အမျိုးသားအမှတ်သရုပ်ပြောရင်း၊ ကိုရီးယားက ကင်ချီနှင့် ဂျပန်က ဆူရှီ ကို ပမာပြု၍ ပြောသည်။ ယဉ်ကျေးမှု သွတ်သွင်းခြင်း ကိစ္စ (cultural programming) ကိုပါ ထည့်စဉ်းစားသည့် အမြင်ကို မှန်းဆမိသည်။ ထောင့်စေ့သည့် အတွေးဟု မြင်သည်။ (စာ – ၃၀ မှ ၃၇ အပေါ် ရှုမြင်ချက်)
စီမံခန့်ခွဲမှု နယ်ပယ်မှာ ပြောကြတာရှိသည်။ “ရောင်းမလား၊ အရောင်းခံမလား”။ ကိုယ့်မှာ ရောင်းစရာ မရှိရင် တော့ အရောင်းခံရမည်မှာ သေချာသလောက်ပင်။
တော်လှန်ရေးသမား ဖြစ်သလို ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် သဘောထားပျော့ပြောင်းသူ
မဟာဗျူဟာကို ချည်းကပ်နိုင်သည့် ပညာတတ်
ခံစားချက်များကို ကွပ်ကဲသော နိုင်ငံရေးသမား
နိုင်ငံရေး အောက်သက်ကျေမှု ကို တန်ဖိုးထားသူ
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးသမားဖြစ်သည့်တိုင် ယုံကြည်ချက်၌ စွဲမြဲသူ
သမိုင်းကို စွဲမြဲသူဖြစ်သည့်တိုင် အတိတ်၏ အကျဉ်းသား အဖြစ်မခံသူ
ပူးပေါင်းလိုစိတ်ထက်သန်သော တစ်ကောင်တည်း ခြသေ့ၤ…. ဟူ၍။ ။
ကိုကိုကြီးက ကျွန်တော် တို့နှင့် တွေ့ရင်း ပြောခဲ့ဖူးသေးသည်။ “အိမ်ထောင်ဆိုတာ ဇွတ်ခုန်ချမှ ကျတာ…တဲ့ သိပ် ဘာမှ စဉ်းစားမနေနဲ့… မျက်စိမှိတ်ပြီးသား ခုန်ချ ပစ်လိုက်…တဲ့” ဤစကားအရသာဆိုလျှင်၊ ကျွန်တော် ကိုကိုကြီးအား ပညတ်ရန်တစ်ခုသာကျန်တော့သည်။
ချစ်တတ်သော တော်လှန်ရေးသမားကြီး ဟူ၍…
ဤစာသည် ကိုကိုကြီး၏ ဘုန်းတော်ဘွဲ့မဟုတ်။ ဟောပြောချက်များ နှင့် ကိုယ်တွေ့ထိတွေ့ရသလောက် အတ္တနောမတိဖြင့် ရီဗျူး လုပ်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲနိုင်ကြကုန်….။
ကျွန်ုပ်သည် နိုင်ငံရေးပရောဟိတ် မဟုတ်။ မြင်နိုင်သလောက် မျက်လုံးကို ပြူးကြည့်မိခြင်းသာ….။
Tagged 8888 Student Leader, Identity Politics, K3, Ko Ko Kyi, People Party
Previous post တို့ . . . မြန်မာတွေ
Next post သုတေသနဖန်ပြား